घरबाटै कर तिर्ने प्रणालीबाट राजस्व प्रशासन स्मार्ट बनाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका कर निर्धारण, मुल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने - bampijhyala.com
३२ औं गृष्मकालीन ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै
चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिअन्ट फैलिन थालेपछि बढ्दो चिन्ता
२ हजार २७९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, २३ जनाको मृत्यु
आज दोलखामा थप ३८ जनामा कोरोना पुष्टि, १८ संक्रमण मुक्त, ९ दिनमा २१० जना संक्रमण बृद्धि
Home > समाचार > घरबाटै कर तिर्ने प्रणालीबाट राजस्व प्रशासन स्मार्ट बनाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका कर निर्धारण, मुल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने
घरबाटै कर तिर्ने प्रणालीबाट राजस्व प्रशासन स्मार्ट बनाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका कर निर्धारण, मुल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने
३१ असार २०७८, बिहीबार २१:४३ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका करदाताले सबै प्रकारका कर र सेवा शुल्क घरमै बसेर तिर्न सक्ने भएका छन् । यसका लागि पहिलो एक पटक सफ्टवेयरमा विवरण भरेर दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि कनेक्ट आइपीएस, इसेवा, खल्ती पे र फोनजस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरेर मोवाइलबाटै कर र सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ । सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय कर महानगरका मुख्य कर शीर्षक हुन् । यसबाहेक सेवा शुल्क र दस्तुर अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न र आफूले तिरेको शुल्कको रसिद अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो प्रणाली सुरु गर्न एक पटक वडामा जानु पर्छ । त्यसपछि घरमै बसेर सेवा लिन सकिनेछ ।
पहिलो पटक वडामा किन बोलाउनु परेको हो? प्रश्नको उत्तरमा राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘करदाता आफैंले पनि अनलाइनमा गएर विवरण दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले भरेका विवरणहरुमा फोन नं., इमेल लगायतका विवरण छुट्ने गरेका छन् । कोही पनि करदातालाई वडामा पुग्न आधा घण्टाभन्दा बढी समय नलाग्ने भएकोले पहिलो पटकको विवरणका लागि वडामा बोलाएका हौँ ।’
प्रबिधिमा आधारित यो सेवा ०७७ असोज १ गतेदेखि नमूनाका रुपमा वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ गरी १० वटा वडाबाट नमूनाका रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सफ्टवेयरको प्रयोगबाट उत्साहित हुँदै असोज ५ गतेदेखि वडा ५, ६, ७, ९, १२, १४, १६, २८, २९ र ३२ वडा गरी थप १० वटा वडामा सेवा जोडियो ।
यस अवधिमा प्रणालीमा जोडिएका करदाताले १ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व तिरिसकेका थिए ।
चरणवद्ध रुपमा सञ्चालन थालिएको राजस्व निर्धारण तथा संकलन प्रणाली असोज १३ गतेदेखि सबै वडाबाट सञ्चालन गरिएको थियो ।
सहभागितामुलक र पारदर्शी राजस्व प्रणाली विकास गर्दै जान सुरु गरिएको प्रणालीले स्मार्ट नगरको एउटा सूचक पूरा गरेको छ । राजस्व विभागका प्रमुख डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘महानगर करदाताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा अनुभुति गराउने प्रयास गरेका छौँ । यसको प्रयोगबाट सुशासनमा टेवा पुग्नेछ । करदाताको डाटाबेस तयार हुनेछ । त्यस्तै आउँदा बर्षहरुका लागि राजस्व अनुमानलाई वास्तविक बनाउँछ ।’ करदाताको विवरण सफ्टवेयरमा दर्ता गरिसकेपछि आन्तरिक संकेत र करदाता कोड प्राप्त हुन्छ । यही कोडका आधारमा पछिल्लो पटक मोवाइलबाटै कर तथा दस्तुर तिर्न मिल्छ ।
यस प्रणालीमा २ वटा पोर्टल छन् । एउटा पब्लिक र अर्को कोर । पब्लिक पोर्टल करदाताका लागि हो भने कोर पोर्टल कार्यालयमा बस्ने अधिकारीका लागि हो । पब्लिक पोर्टलमा करदाताले आफू सम्बन्धित घर, जग्गा, सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, सवारी साधन जस्ता व्यक्तिगत विवरण हुन्छन् । यस पोर्टलबाट महानगरले उठाउने मनोरञ्जन, घर नक्सा पास दस्तुरलगायत सम्पूर्ण कर र दस्तुरको दर थाहा पाउन सकिन्छ ।
पब्लिक पोर्टलका फिचर सेवाग्राहीले प्रयोग गर्नका लागि हुन् । यसमा करदाताले महानगरलाई बुझाउनु पर्ने करको प्रारम्भिक मुल्याङ्क करदाता आफैंले घरमै बसेर गर्न सक्ने सुबिधा छ । करदातासँग सम्बन्धित र सोधिएका÷माग गरिएका विवरण भरेपछि प्रणाली आफैंले करको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेर तिर्नुपर्ने राजस्वको अङ्क देखाउँछ । यसबाट महानगरलाई कति रकम तिर्नु पर्ने हो? करदातालाई थाहा हुन्छ । करदाताका लागि यो जानकारी रकम र समय व्यवस्थापनका कोणबाट महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।
करदाताको विवरण पेस भएपछि कर मूल्याङ्कन अधिकृतले प्रचलित कानुन र दररेटका आधारमा स्वचालित प्रणालीबाट तयार भएको कर विवरणलाई रुजु र स्वीकृत गर्नेछन् । त्यसपछि करदाताले आफूसँग भएका विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (ईसेवा, कनेक्टआईपीएस, खल्ती, फोनपे) बाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसरी भुक्तानी गरिएको रकम सम्बन्धि सूचना एसएमएसबाट पनि प्राप्त हुनेछ ।
अनलाइन प्रणालीका बारेमा वडाका अधिकारीको क्षमता बढाउन आज अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको थियो । त्यस क्रममा सफ्टवेयर विकासकर्ताकातर्फबाट प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । प्रस्तुतिकरणमा लाभग्राहीबाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरु, विवरण भर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु लगायत विषय उठाइएका थिए ।
पूजा र आकाशको प्रेमकहानी
१७ श्रावण २०७८, आईतवार २०:२२ bampijhyala 0
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण...
१७ श्रावण २०७८, आईतवार १९:३५ bampijhyala 0
सरकारसँग वितरण गर्न बाँकी मौज्दात मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी डेढ लाख बाँकी
१७ साउन, बाँपीझ्याला, काठमाडौं । सरकारसँग वितरण गर्न बाँकी...
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:३६ bampijhyala 0
कोरोना संक्रमण बढेपछि व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठक बस्दै
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि कोभिड–१९...
Covid -19 समाचार
हजुरको आजको दिन, २०७८ साउन १८ गते, साेमवार, २ अगस्ट २०२१
हजुरको आजको दिन, २०७८ साउन १७ गते, आइतवार, १ अगस्ट २०२१
हजुरको आज शनिवारको दिन, २०७८ साउन १६ गते, शनिवार, ३१ जुलाई २०२१
हजुरको आजको दिन, २०७८ साउन १५ गते, शुक्रवार, ३० जुलाई २०२१
आज साउन १५, घर घरमा खीर खाएर मनाइयो
आज खिर खाने दिन साउन १५
१९ श्रावण २०७८, मंगलवार ००:०४ bampijhyala
१८ श्रावण २०७८, सोमबार २०:०३ bampijhyala
१८ श्रावण २०७८, सोमबार १९:३५ bampijhyala
१८ श्रावण २०७८, सोमबार १९:२८ bampijhyala
१८ श्रावण २०७८, सोमबार १९:०८ bampijhyala
अमेरिकाले आफ्नो फौज फिर्ता लिन गरेको आकस्मिक निर्णय देशको खस्कँदो सुरक्षास्थितिको प्रमुख कारक हो : अफगानिस्तान राष्ट्रपति घानी
अनाथहरुको सीमाभित्र साइराम रिमा !
सम्बन्ध जोसुकै संग हुन्छ त्यो जटिल हुनुपर्छ, भावनात्मक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध होस् या भौतिक सम्बन्ध । अझ खुलेर भन्नुपर्दा नारी र पुरुष बीचको सम्बन्धलाई यस धरातलमा अपरिहार्यता छ । जुन कुरालाई एउटा रथका...
दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालीका वडा नं. २ डोकलुङा...
बाल विवाहको परिणाम
वा त गिथि यङन् बाँलस्के तइरी..!
३२ औं गृष्मकालीन ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै ३१ असार २०७८, बिहीबार २१:४३
चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिअन्ट फैलिन थालेपछि बढ्दो चिन्ता ३१ असार २०७८, बिहीबार २१:४३
२ हजार २७९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, २३ जनाको मृत्यु ३१ असार २०७८, बिहीबार २१:४३
आज दोलखामा थप ३८ जनामा कोरोना पुष्टि, १८ संक्रमण मुक्त, ९ दिनमा २१० जना संक्रमण बृद्धि ३१ असार २०७८, बिहीबार २१:४३
अमेरिकाले आफ्नो फौज फिर्ता लिन गरेको आकस्मिक निर्णय देशको खस्कँदो सुरक्षास्थितिको प्रमुख कारक हो : अफगानिस्तान राष्ट्रपति घानी ३१ असार २०७८, बिहीबार २१:४३